Michael Owen oo si caro leh kaga hadlay guuldarradii xalay Liverpool kasoo gaartay kooxda Atalanta – Gool FM
Rivaldo oo ka hadlay fikirkiisa ku aadan wararka Lionel Messi la xiriirinaya inuu ku biirayo Paris Saint-Germain
“Cristiano Ronaldo ma ahan kan ugu fiican adduunka.” – George Weah
Real Madrid oo xaqiijisay in Tababaraheeda Zinedine Zidane laga helay Korona Fayras
Dajiye November 26, 2020
(Liverpool) 26 Nof 2020. Halyeeyga kubadda cagta England iyo kooxda Liverpool ee Michael Owen ayaa muujiyay sida uu kaga carooday qaab ciyaaeedka Reds inta lagu gudi jiray ciyaartii ay xalay la ciyaareen naadiga Atalanta.
Kooxda kubadda cagta Atalanta oo marti ku aheyd garoonka Anfield ayaa ku soo adkaatay 0-2, waxaana goolasha u dhaliyay xiddigaheeda Josip Ilicic iyo Robin Gosens, xilli ay ciyaartaan qeyb ka ahayd kulamada Afaraad wareega group-yada ee tartanka Champions League.
Liverpool ayaa wali ku hoggaamineysa 9 dhibcood GROUP D, waxayna Reds u baahan tahay inay guul gaarto hal kulan ka mid ah labada kulan soo aadan ay la ciyaari doonto kooxaha Ajax iyo Midtjylland, si ay u xaqiijiso u soo bixitaankeeda wareega xiga 16-ka ee tartanka Champions League.
Hadda sida uu daabacay wargeyska “Daily Mail” Michael Owen ayaa ciyaarta kaddib ciyaarta:
“Wuxuu ahaa qaab ciyaareed aad u liita, kii ugu xumaa ee aan ka aragnay Liverpool muddo dheer.”
“Kani waa mid kamid ah kulamada aad u diyaarisay inaad diirada saarto kulanka soosocda, waa inaad mar walba raadisaa waxyaabaha wanaagsan, haddii aad ku jirto maalin adag, taasi waa inay ahaataa maanta.”
Chelsea oo qorsheeneysa inay qandaraaska u kordhiso Thiago Silva